avril 2022 - FJKM Amparibe Famonjena
VATSIMPANAHY APRILY 2022
Perikopa : Lioka 15 : 7-11 ; Matio 6 : 1-4 ; Efesiana 2 : 8-10
« Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesoa mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. » Efesiana 2 : 10
Isan’ny foto-kevitra iray ao anatin’ny Tondrozotra 2022 ny fanentanana antsika mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena ny mahakasika asa tsara ».
Maro ny asa tsara ambaran’ny Baiboly, ka tsy àry ho voatanisa eto, fa andraisantsika santionany izao perikopa izao, dia araka ny Efes.2:10. Raha mahatsiaro tsara ianareo, dia andinin-tsoratra Masina efa Tondrozotrantsika tany aloha izy io. Raha izany, dia nantsoin’ny Tompo ho amin’ny asa tsara isika eto Amparibe Famonjena. ‘Ndao àry hohamafisina izany amin’ny alalan’ny fandraisana ireto hevitra ireto.
Noforonin’Andriamanitra hanao asa tsara isika ;
Namboarin’Andriamanitra handeha araka izany isika.
Noforonin’Andriamanitra hanao asa tsara isika eto Amparibe Famonjena
Ny antom-pisiantsika ety ambany masoandro raha ny hevitr’Andriamanitra dia ny hanao asa tsara. Asa tsara tahaka ny ahoana izany?
* Fiantrana ho an’ny rahalahy malahelo (“shemittah”, teny hebreo)
* Atao am-pitiavana izany mba hahafa-pahasahiranana azy.
Rehefa tanterahintsika izany dia fitahiana ho antsika amin’izay asa sy ny ataon’ny tanantsika rehetra.
Rehefa tsy manao izany kosa isika dia fiampangana antsika eo anatrehan’Andriamanitra ka zary tonga mibaby trosa mandrakariva (Deo.15:7-11).
Namboarin’Andriamanitra handeha araka izany isika eto Amparibe Famonjena
Ny nahatongavantsika tety ambonin’ny tany raha ny fikasan’Andriamanitra dia hanao soa amin’ny namana.
* Ny fitsimbinana ny namana dia sitrak’Andriamanitra tokoa.
* Ny fanampiana ny havana amin’ny fo tsotra tsy misy fireharehana no tian’Andriamanitra ho voasokajy asa tsara.
Fisehoan’ny fitiavana madio sy masina ny fahalalahan-tanana amin’ny rahalahy madinika. Asan’ny Tompo mamonjy azy amin’ny sarotra izany, ka misy valim-pitia avy amin’ny Tompo tokoa. Raha mihirim-belona isika, dia mihidy ho antsika koa ny trano fitehirizan-tsoa any an-danitra sady mbola am-pamoahana ny amin’izany isika rahatrizay (Mat.6:1-4)
* Izany no hisian’ny loloha sy ny mpianatra Soratra Masin’ny Fokontany iadidiantsika amin’ny alalan’ny Vaomiera Asa Vavolombelona.
* Tohany amin’ny rakitra am-baravarana ny mpanompon’Andriamanitra handeha hiasa lavitra (Evanjelistra).
* Mivavaha hatrany ho an’ireny mpiara-mivavaka amintsika mangataka mba hoentina am-bavaka ireny (voady…).
* Meteza ho tanan’Andriamanitra mitsotra mamonjy ny namana amin’izay sarotra mahazo azy.
Raha izany no iainantsika, dia isika eto Amparibe Famonjena no mahatanteraka ilay ambaran’ny Soratra Masina hoe: “Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo”; sy ny vinan’ny F.J.KM. manao hoe: “Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara – Filazantsara manova ny tantara”.
* Ianareo SSAAV, indrindra izay mankalaza tsingerintaona, asa tsara hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no tanteraho.
* Ampio ny ankizy sy ny tanora amin’ny fiatrehana ny fianarana sy ny fizaran’asa, fa fitsimbinanao ny hoaviny izany
* Aoka tsy ho lalim-paosy sy hihidy
poketra amin’ny asan’Andriamanitra isika. Aza mihirim-belona amin’ny ezaka rehetra ataon’ny fiangonana, satria ireny no asan’ny finoana sady maneho ny fitiavantsika ny asan’ny Tompo ary ho fisehoan’ny asan’ny Fanahy Masina ato anatintsika.
Ry Amparibe Famonjena, raha miaina sy mivelona amin’ny fanatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra tokoa isika; ka manaraka ny hevitra sy ny fikasan’Andriamanitra antony nahatongavantsika eto an-tany dia isika no miorina amin’ny asa tsara. Raha tsy izany, dia mivadika amin’Andriamanitra isika, ka manohitra ny antony nahariany antsika.